Top 10 Distibutor’s Share: Ajay Devgn wuxuu noqday atooraha ugu horeeyay ee aan Sedexda Khan ahayn filimkiisa 100 Crore faa’iido ah laga helo! | Filimside.net
Home » Box Office » Top 10 Distibutor’s Share: Ajay Devgn wuxuu noqday atooraha ugu horeeyay ee aan Sedexda Khan ahayn filimkiisa 100 Crore faa’iido ah laga helo!
Top 10 Distibutor’s Share: Ajay Devgn wuxuu noqday atooraha ugu horeeyay ee aan Sedexda Khan ahayn filimkiisa 100 Crore faa’iido ah laga helo!
Golmaal Again wuxuu ku biiray liiska aflaanta heerka sare gaareen (Elite Films) kuwaas oo u suura gashay in 100 Crore saami ah ama macaash ah kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helan (100 Crore Distributor’s Share).
Super Star Ajay Devgn wuxuu noqday atooraha ugu horeeyay ee Bollywood-ka ka tirsan kaasi oo aan Sedexda Khans ahayn lagana helo filimkkiisa 100 Crore oo macaash ah ama kooxda cajaladaha qeybiyaan ka helaan.
Waxaan joognaa waqti ay haatan adag tahay in filimada 100 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyaan balse Golmaal Again caqabadahaas ma heestaan madaama 100 Crore saami ah faa’iido ahaan looga helay waana guul weyn oo kooxda filimkaan usoo hoyotay.
Golmaal Again 205 Crore ayuu Boxoffice-ka kasoo xareeyay waxaana kooxda filimkaan kusoo aaday 100 Crore saami ah (Distributor’s Share) taasi oo ka dhigan in 48.78% kooxda cajaladaha qeybiyaan qaateen lacagaha Golmala halka 51.21% kooxda tiyaatarada iska leh (Exhibitors) ay qaateen lacagaha filimka Golmaal Again soo xareeyay.
Golmaal Again waa filimka 10-aad oo Hindi ah kaasi oo 100 Crore saami ahaan laga helo balse kaalinta kowaad waxaa ku jiro Baahubali 2 oo iskoor waali ah sameeyay madaama 251 Crore saami ah kooxda cajaladaha qeybiyaan ka heleen!
Hadii Baahubali 2 xisaabta lagu daro Golmaal Again wuxuu noqonaa filimka 11-aad ee Hindi ah kaasi oo 100 Crore saami ah laga helo (100 Crore Distributor’s Share).
1. Bahubali 2 – The Conclusion (2017): 251.39 Crore (Qaybta Af Hindiga lagu daawaday oo kaliya)
2. Dangal (2016): 182.95 Crore
3. PK (2014): 169.80 Crore
4. Bajrangi Bhaijaan (2015): 162.19 Crore
5. Sultan (2016): 158.50 Crore
6. Dhoom 3 (2013): 141.92 Crore
7. Kick (2014): 118.64 Crore
8. Chennai Express (2013): 114.34 Crore
9. Ek Tha Tiger (2012): 106.85 Crore
10. Prem Ratan Dhan Payo (2015): 106.27 Crore
11. Golmaal Again (2017): 101 Crore (ayaa laga heli doonaa)
Atoorayaasha Darajada 100 Crore saami ah gaaraan sida ay ugu kala badan yihiin:
1. Salman Khan 5-filim taasi oo ka dhigan in 50% filimada 100 Crore saami laga helay isaga ugu badan yahay.
2. Aamir Khan 3-filim
3. Shah Rukh Khan 1-filim
4. Ajay Devgn 1-filim
3 Responses to Top 10 Distibutor’s Share: Ajay Devgn wuxuu noqday atooraha ugu horeeyay ee aan Sedexda Khan ahayn filimkiisa 100 Crore faa’iido ah laga helo!
ajay TOTALDAMBAAL haduu guulaysto micnaha blockbester noqdo saw akshay kumar kama awood badnaanayo
sxb 3 idiots 100crore ka badan bu soo xareeyay maaha.
Waa runtaa wuu soo xareeyay oo weliba 20 Crore ayuu keenay balse saamiga laga helay wa 98.55 Crore, wuxuuna maqaalkan ka hadlaa saami ahaan aflaanta 100 Crore laga helay, waxaan filaa inaad na fahantay.